Intel Namoaka Ny Next Generation Desktop Computers - News Fitsipika
Intel Namoaka Ny Next Generation Desktop Computers
CHIPMAKER Intel dia misarom-boaly fitaovana maro anisan'izany ny biraonao PCs Powered by vaovao farany poti amin'ny Iris Pro sary, na dia eo aza ny lasa miadana kokoa PC tsena.
Anton-javatra vaovao ho avy endrika taona ity dia ahitana Mini PCs sy ny portable rehetra-in-iray rafitra, izay manasongadina Vonona Mode Teknolojia izay mamela ny PC hijanona mifandray na dia izany ao amin'ny hery-fahavaratra fanjakana.
Intel fahefatra Gen fototra Chip amin'ny fitondrana manaraka Gen Desktops
Ny kilasy vaovao ny fitaovana dia PC nanao an-20Amin'izany touchscreen amin'ny bateria sy ny fahafahana slot ho docking toerana.
Deutsch: Intel fototra i7-970 ambany (sary: Wikipedia)
Na dia eo aza ny fihenan'ny ny nentim-paharazana biraonao rafitra PC raha oharina amin'ny solosaina sy ny fitaovana hafa, Intel manantena ny tsipika vaovao dia hamelona ny miady PC tsena amin'ny alalan'ny fanampiana fahaiza-manao natao mba hahaliana ny na raharaham-barotra sy ny mpanjifa mitovy.
“Ny biraonao raharaham-barotra dia lehibe sy manan-danja ho an'ny ampahany Intel, ary isika mampiasa vola ao aminy – reinventing teny lafin-javatra, traikefa sy ny vokatra ho an'ny mpanjifa,” hoy Intel VP sy GM ny ny Desktop Client Platform Group, Lisa Graff.
Ary koa ny lafin-javatra kely PCs endrika toy ny Intel ny NUC (Next Unit ny computing), ny chipmaker vokam-in ny rehetra-ny boky iray antsoina hoe Black famolavolana Brook, izay manasongadina ny touchscreen ho an'ny Windows 8, Asehoy ny habe ny ny 27in, ary ny anatiny izany bateria azo ampiasaina tsy ho tethered amin'ny rindrina ny faladiany.
Black Brook dia ahitana ny Integrated Intel Realsense 3D fakan-tsary, ny QUAD mikrô voaomana, Premium-peo sy ny HD feno maneho.
Intel koa ny tsipiriany taranaka fahefatra vaovao Core processors avy tatỳ aoriana amin'ity taona ity, anisan'izany ny Chip codenamed Devoly Canyon tamin'ny fanatsarana mafana interface tsara sy ny CPU fonosana mba hamela ny overclocking, ary ny Fototra i7 Extreme Edition manohana hatramin'ny valo cores sy 16 kofehy amin'ny fitadidiana DDR4 fanohanana.
Intel ihany koa nilaza fa hanana biraonao dikan-ny atsy ho atsy taranaka fahadimy Core poti codenamed Broadwell, izay hitondra ny Iris Pro sary ho amin'ny biraonao voalohany mba hanafaka ny tosika amin'ny sary fampisehoana.
Vonona Mode Teknolojia, izay dia ho hita ao amin'ny Select OEM rafitra in 2014, dia nofaritana ho toy ny fahaizany izay maka tombony ny hery-mamonjy ny firenena ao Intel Core taranaka fahefatra poti mba hahafahan'ny PCs hijanona vonona, ary nifandray foana na dia rehefa ao amin'ny hery-fahavaratra fanjakana. Mety ho ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny PC dia vonona lalandava mivantana fitaovana haino aman-jery hafa ao an-trano, ohatra, araka ny mafy.
Tamin'ny volana Desambra, mpandalina akanjo hoy IDC PC varotra nihena ratsy noho efa nampoizina tao 2013, toy ny smartphone sy ny takela-bato mbola mibahana ny mpanjifa teknolojia tsena.
“Maneran-tany PC entana lavon -10.1 isan-jato tamin'ny taona lasa,” IDC hoy, kely kokoa noho ny teo aloha fanitarana ny -9.7 isan-jato, manao izany “avy lavitra ny tena henjana amin'ny firaketana an-tsoratra isan-taona Contraction”. M
Ity lahatsoratra ity, Intel Namoaka Ny taranaka manaraka biraonao solosaina PC na dia eo aza sahirana tsena, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto amin'ny
22336	0 Broadwell, Central fikarakarana vondrona, Desktop solosaina, Intel, Intel Core, Next Unit ny computing, Personal solosaina, Windows 8
← Nanafika mpijirika OTAN Sites ! Ny olombelona dia afaka mahita ny iray tapitrisa tapitrisa fofona →